Stockholm oo rajo ka qabta la wareegidda haayad muhiim ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haayada dawooyinka EU oo loo codeeynayo meeshi ay degi laheeyd. sawir: Pontus Lundahl/TT
Stockholm oo rajo ka qabta la wareegidda haayad muhiim ah
Stockholm oo rajaynaysa in ay haayadda dawooyinka Yurub u soo guurto.
La daabacay måndag 20 november 2017 kl 14.16
Stockholm oo dadaal ugu jirta in ay ku guulaysto in haayadda dawooyinka ee Yurub ay u soo guurto halkaan.
Haayaddan oo ay ka howlgalaan in ka badan 900 oo shaqaale ah ayaa hada ku taala magaalada London, balse hada waxa loo raadinayaa magaale kale oo hooy u noqota haayaddan iyo shaqaalaheeda. Tan ayaa ka danbeysay markii uu Ingiriisku ka baxay isbahaysiga Yurub.
Tartanka haaydan wadamada Yurub ugu jiraan ayaa ah mid aad u adag oo mudo dheer soo socday, balse maanta ayaa loo codaynayaa 19:ka waddan ee isugu soo hadhay tartanka kama danbeeynta ah. Cod bixintu waa mid sir ah, sida lagu daabacay wakaalada wararka ee TT, balse waxa la ogyahay in wasiirada ganacsiga ee wadamada midawga Yurub codeenayaan maanta, natiijadana la sugaayo galabnimadka maanta.
Magaalooyinka tartanka adag kula jira Stockholm waxa ka mid ah, Wien, Milano, Lille, Kopenhagen iyo Amsterdam. Kuguulaysiga haayddan waxa ay xambaarsan tahay shaqo abuuris iyo karaamo.
Sweden waxa hore ugu yaala dhowr haayadood oo midawga Yurub hoos yimaada. Base Ann Linde oo ah wasiirka Sweden u qaabilsan Yurub waxa ay rajo ka qabtaa in ay haayaddan imandoonta Stockholm. Waxay Linde sheegtay in waxyaabaha u sahlaaya Stockholm in ay ku guulaysato codeyntan ay tahay in ay Stockholm iyo London isku dhow yihiin.
-Waxay ilatahay in loo baahan yahay in shaqada oo dhan si sahlan loogu rarikaro meesha cusub iyada oo aan wax hakad ah ku imanin shaqada haayadda. Maxaayeelay waxa aan ka hadlaynaa waa amaanka bukaanka iyo welibada nolosha iyo geerida. Waa arrin aad u muhiima waxa ay tahay in aan go´aan ka gaadhno gelinka danbe ee maanta. Sidaas awgeed ma odhan kara waa maalintii wadan hebel, ayey sheegtay Linde.